အသက် ၃၇ နှစ် - OMFG! ကျွန်ုပ်၏ ၂၃ နှစ်လိင်ဆက်ဆံမှုတွင် Delayed သုက်လွှတ်မှု - Your Brain On Porn မှမခံစားခဲ့ရသည့်ပထမဆုံးအကြိမ်
အသက် ၃၇ နှစ် - OMFG! ငါ Delayed သုက်လွှတ်မှုကနေမခံစားရဘူးသောငါ၏ 37 နှစ်လိင်အတွက်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်
ကျွန်ုပ်သည် Delayed သုက်လွှတ်မှုကြောင့်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးခံစားခဲ့ရသည်။ အသက် ၁၄ နှစ်မှာအပျိုစင်ဘဝပျောက်ဆုံးသွားတယ်။ အဲဒီတုန်းကတောင်မပြီးသေးဘူး ယနေ့ကျွန်ုပ်သည်မြေကြီးပေါ်မှာ ၃၇ နှစ်တာကာလအတွင်း DE ကိုမခံစားခဲ့ရသည့်ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်သည်။ ငါပြီးအောင်နိုင်ခဲ့တယ်, ငါအားကြီးသောလက်စသတ်။
NoPMO ၏ရက်ပေါင်း ၆၀ ကြာပြီးနောက်ကျွန်ုပ်သည်သုံးမွှာပူးအောင်ပြုလုပ်ရန်ကလေးဘက်ထရီလုံလောက်စွာသိုလှောင်ထားသည်။ မိန်းမကကိုယ်ဝန်မရှိဘူးလို့ငါမျှော်လင့်တယ်။ ငါအရင်ကဒီကိစ္စကိုစိတ်ပူစရာမလိုဘူး။ ပုံမှန်လိင်တံပြproblemsနာများ, eh?
NoFap ကယောက်ျားတွေကိုတကယ်အလုပ်လုပ်တယ် အသက်ရှင်၊ အသက်၊ သက်သေခံချက်ပါ။
LINK - OMFG! NoFap အလုပ်လုပ်။ DE ကုသပေးခဲ့။